20 Kaarka Amaahda Safarka Ugu Fiican Sanadka 2021 - Goobta Hantida
Bogga ugu weyn 20 Kaarka Amaahda Safarka Ugu Fiican Sanadka 2021
Sanadkii la soo dhaafay, kaararka amaahda safarka ayaa ahaa waxa ugu fog maskaxdeena. Si kastaba ha noqotee, markii dunidu bilawday inay mar kale furto kadib masiibada, hadda waa waqtigii la tixgelin lahaa waxa ay tani uga dhigan tahay boorsooyinkayaga. Adigoo adeegsanaya kaarka amaahda ee safarka, waxaad ku kasban kartaa dhibco ama mayl loo isticmaali karo safarka.
Intaa waxaa sii dheer, haddii aad doorato kaarka ku habboon, waxaa laga yaabaa inaad hesho dhowr gunno oo kale. Sida ajuurada macaamil shisheeye oo kale, boorsooyinka la hubiyay ee bilaashka ah, caymiska safarka. Iyo xitaa dhibco xagga codsiyada Global Entry ama TSA PreCheck.
Waa kuwan 20 kaararka amaahda safarka ugu fiican ee 2021 si ay kaaga caawiyaan inaad kuwa ugu fiican ka soo xulato kuwa kale.
1. Chase Sapphire La Doorbiday@ Kaarka:
Mid ka mid ah safarka ugu caansan wuxuu abaalmariyaa kaararka deynta ee laga heli karo Kaarka Safeer ee Preferred®. Intaas waxaa sii dheer, kaarka waxaa ku jira tan qiima leh oo si raaxo leh u qiilineysa $ 95 oo ah khidmadda sanadlaha ah. Waad ku mahadsan tahay gunno is-qoritaan oo heer sare ah.
Iyo soo noqosho weyn oo ku saabsan iibsiyada safarka iyo cuntada. Dadka haysta kaarka waxay u adeegsan karaan dhibcahooda inay ku ballansadaan safarka Chase. Ama ku wareeji mid ka mid ah 13 -ka diyaaradood ee qiimaha leh iyo la -hawlgalayaasha hudheelka ee Chase 1.25 senti halkii dhibic. Dhammaan astaamahan cajiibka ah waxay ka dhigayaan mid ka mid ah kaararka amaahda safarka ugu fiican ee abid.
Intaa waxaa sii dheer, iibsashada lagu sameeyo Chase Travel waxay ku kasban doontaa 5x dhibcood, 3x dhibcood xagga cuntada, qaar ka mid ah adeegyada qulqulka. Iyo iibsashada dukaanka raashinka ee internetka, 2x dhibcood dhammaan safarada kale, iyo 1x dhibcood wax kasta oo kale.
Gunnada is-qoritaanka kaarka ee hadda waa mid deeqsi ah. Waxaa lagu qiimeeyaa $ 2,000 TPG. Markaad ballansato hudheel adiga oo maraya Abaal -marinnada Ugu Dambeeya, waxaad heli doontaa $ 50 sumcad caddayn huteel sannad kasta. Faa'iidooyinka ilaalinta safarka ee caymiska waxaa ka mid ah caymiska baajinta safarka. Caymiska kirada koowaad ee baabuurka, iyo caymiska boorsooyinka oo lumay.
2. Soo hel, Miles:
Sannadka 2021, waa maxay kaarka safarka ugu fiican? Mid ka mid ah kaararka amaahda safarka ugu fiican sanadka 2021 waa kaarka deynta ee maylka. Ma jiraan khidmado macaamil ganacsi oo shisheeye, APR doorsooma oo ah 11.99%, 22.99 boqolkiiba. (oo lagu daray, 0% intro APR oo ku saabsan iibsiyada 14 bilood iyo 10.99 boqolkiiba intro APR ee wareejinta dheelitirka isla muddadaas).
Iyo barnaamij abaalmarin deeqsinimo leh oo bixiya 1.5X mayl doolar kasta oo lagu kharash gareeyay dhammaan wax iibsiyada oo lagu soo furan karo sumcad ahaan bayaan loogu safro makhaayadaha ama iibsashada saldhigga gaaska. Sidoo kale looma baahna in laga walwalo khidmadda sanadlaha ah.
3. Kaarka Premier Citi:
Iyada oo ay ugu wacan tahay qaybaha kharashaadka gunnada ah ee deeqsinimada leh, Kaarka Premier Citi waa mid ka mid ah kaararka abaalmarinta safarka ugu fiican ee bilowga ah. Intaas waxaa sii dheer, waxaad heli doontaa dhibco saddex -laab ah oo keliya duulimaadyada iyo hoteellada, laakiin sidoo kale makhaayadaha, suuqyada waaweyn, iyo kaalmaha shidaalka, oo ku siinaya fursado badan oo aad ku kasbato kharashyada maalinlaha ah.
Intaa waxaa dheer, qaybta ugu fiican ayaa ah in qodobbadaada lagu wareejin karo barnaamijyo kala duwan oo soo noqnoqda oo ku baahsan dhammaan isbahaysiga diyaaradda. Astaamaha lagu wareejin karo kaarka amaahda ee Citi ayaa ka dhiga mid ka mid ah kaararka deynta ee ugu wanaagsan safarka.
Ugu dambayn, ballansashada hal-joogga ah ee $ 500 ama ka badan, Citi waxay bixisaa $ 100 gunno kayd ah oo hudheel ah (marka laga reebo canshuuraha iyo khidmadaha).
4. Kaarka Amaahda ee Abaalmarinta Hantida Lacageed ee Capital One:
Haddii aad rabto inaad kasbato abaalmarino aad u weyn hoteelkaaga xiga, Kaarka Amaahiyaha Abaalmarinta Capital One Venture waa ikhtiyaar wanaagsan. Intaa waxaa dheer, dhammaan boosaska hudheelka iyo kiraynta baabuurka ee lagu ballansan yahay Capital One Travel waxay kasbadaan 5X mayl, halka dhammaan iibsiyada kale ay kasbadaan 2X mayl.
Intaas waxaa sii dheer, $ 100 deyn ah oo loogu talagalay Galitaanka Caalamiga ah ama arjiga TSA PreCheck, ma jiro kharash macaamil shisheeye, caymiska shilka safarka. Waxaa jira adeegyo caawimaad safar oo 24-saac ah, iyo dhaafitaanka burburka shilka baabuurka ayaa ka mid ah faa'iidooyinka kale. In kasta oo kaarku aanu bilaash ahayn, khidmadda sannadlaha ahi waa mid la awoodi karo $ 95, taas oo ka dhigaysa doorasho aad u fiican. Iyo mid ka mid ah kaararka amaahda safarka ugu fiican sanadka 2021.
5. Kaarka Platinum -ka ee American Express:
Markay timaaddo faa'iidooyinka safarka iyo faa'iidooyinka, Amex Platinum lama barbar dhigo. Intaa waxaa dheer, kaarkaani wuxuu aad ugu habboon yahay khidmadda sanadlaha ah ee qaaliga ah haddii aad qiimeyso gelitaanka qolka nasashada, heerka hoteelka, iyo dhibcaha bayaanka sannadlaha ah. Waa mid ka mid ah kaararka amaahda safarka ugu fiican sanadka 2021.
Si kastaba ha ahaatee, kaarkaan gunnada soo dhaweynta ee hadda waa mid aad u qiimo badan. TPG waxay ku qiyaastay inay u qalanto $ 2,000, marka laga reebo dhibco kasta oo laga helay qaybaha gunnada 10x ee ku -meelgaarka ah. Intaas waxaa sii dheer, kaarkaani wuxuu la imaanayaa faa'iidooyin badan, oo ay ka mid tahay marin u helka Xarumaha Centurion, Hilton iyo heerka sare ee Marriott, iyo in ka badan $ 1,400 dhibcaha bayaanka sannadlaha ah, iyo waxyaabo kale.
Diiwaangelinta kaarka Amex Platinum wuxuu la yimaadaa adeeg macmiil oo qaali ah oo kaa caawin kara wax walba. Diyaarinta boos celin adag si loo helo tilmaamaha goobta si ay kaaga caawiyaan qorsheynta fasaxaaga xiga.
6. Bank of America Abaalmarinta Abaalmarinta Kaarka Deynta:
Haddii Abaalmarinta Socdaalka ee Bangiga Ameerika ay kuu fidiyaan rafcaanno, laakiin aadan buuxin shuruudaha u -qalmitaanka, kaarka amaahda ee Abaalmarinta Abaalmarinta Bangiga Ameerika ayaa noqon kara ikhtiyaar ka fiican. Khubaradu waxay tixgeliyaan in Bangiga Ameerika uu ku safro abaalmarinta kaararka deynta sida mid ka mid ah kaararka deynta safarka ee ugu wanaagsan sanadka 2021.
Intaa waxaa sii dheer, kaarkan, sida kaarka ardayga, wuxuu siinayaa 1.5 dhibcood doolar kasta oo lagu kharash gareeyay dhammaan iibsiyada. Kaas oo lagu iibsan karo iibsiyada safarka ee aqoonta leh.
Si ka duwan sida kaararka kale qaarkood, dhibcaha ma dhacayaan waana la soo furan karaa wakhti kasta. Haddii dadka haysta kaararka cusub ay ku bixiyaan $ 1,000 iibsashada saddexda bilood ee ugu horreysa ee furitaanka akoonka, waxay heli doonaan 25,000 dhibcood oo gunno ah.
7. Kaarka Dahabka ee American Express:
Kani maahan sawir qurxoon oo ku yaal kaarka. Waxay ku bixisaa 4x dhibcood cuntooyinka makhaayadaha iyo suuqyada waaweyn ee Maraykanka. Marka ugu horeysa $ 25,000 ee kharash -garaynta sannad -dugsiyeedka; markaa 1x. waxaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay leedahay kaararka deynta ee ugu fiican safarka.
Waxa kale oo jira qiimayn cunto oo sannadle ah oo ah ilaa $ 120 Grubhub, Seamless, Warshadda Cheesecake, Ruth's Chris Steak House, Boxed, iyo ka qaybgalka goobaha Shake Shack. Iyo sidoo kale deynta Uber Cash sanadlaha ah ilaa $ 120 ($ 10 bishii) oo loo adeegsan karo amarada Uber Eats ama Uber raacitaanka Mareykanka.
Waxaas oo dhami waxay ka dhigayaan caqabad weyn dhammaan iibsiyada cuntada. Kaas oo noqday qayb muhiim ah oo kharash garaynta. Faa'iidooyinka qaarkood, diiwaangelintu waa lagama maarmaan.
8. Kaydka Safayr ee Chase:
Kaydka Chase Sapphire, oo lagu magacaabay mid ka mid ah kaararka safarka ee ugu sarreeya CNN ee 2021, ayaa siiya lacago badan dadka isticmaala ee diyaar u ah inay bixiyaan $ 550 oo ah lacagta sanadlaha ah. Kaydka safayr Chase waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kaararka amaahda safarka ugu caansan uguna wanaagsan.
Intaas waxaa sii dheer, dadka haysta kaarka waxay filan karaan barnaamij abaalmarin aad u dabacsan oo loo adeegsan karo in lagu ballansado safarka Koonfur -galbeed, United, British Airways, Hyatt, Marriott. Iyo IHG; caymiska safarka iyo siyaasadaha ilaalinta gadashada, oo ay ku jiraan caymiska baabuurka kirada koowaad.
$ 300 oo ah deynta bayaanka safarka sanadlaha ah; free Mudnaanta Pass Dooro xubinnimada. Iyo lacag celin $ 100 ah oo ka dhan ah Entrées Global.
9. Hilton wuxuu Maamuusayaa Kaarka Dhaafka ee American Express:
Sida laga soo xigtay CNN, Hilton Honors American Express Surpass Card waa kaalin aad u fiican haddii aad tahay xaashiyaha Hilton soo noqnoqda oo doonaya inuu helo gunno badan oo dheeraad ah adigoon bixin boqollaal doollar khidmadaha sannadlaha ah. Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kaararka amaahda safarka ugu fiican ee socdaalayaasha soo noqnoqda ee Hilton.
Waxaad ku heli kartaa darajada sare ee Hilton Gold qiimo jaban $ 95 sanadkii. Haddii aad $ 2,000 ku iibsato iibsiyada u -qalma saddexda bilood ee ugu horreysa ee furitaanka akoonka, waxaad heli doontaa 130,000 dhibcood oo ah gunno Hilton Honors. Oo haddii aad ku bixiso $ 10,000 lixda bilood ee ugu horreysa, waxaad heli doontaa 50,000 dhibcood oo kale.
10. Kaarka amaahda ee la doorbiday Ganacsiga Khadadka:
Gunnada is-qoritaanka ee Kaadhka amaahda ee La-doorbiday ee Ganacsiga Ink waa midda ugu wanaagsan ee aan ka aragnay Chase. Intaa waxaa dheer, hel dhibco afarta aag ee gunnada ah ee ugu caansan meheradaha. (Socdaalka, dhoofinta, xayaysiinta, iyo bixiyeyaasha isgaarsiinta).
Intaa waxaa dheer, kaarka waxaa ku jira ilaalinta safarka iyo dukaamaysiga iyo sidoo kale daboolida koowaad ee adiga iyo shaqaalahaaga marka aad kiraysanayso baabuur ujeedooyin ganacsi.
11. Hotel.com Abaalmarinta Kaarka Deynta Fiisaha:
Kaarka Amaahda Fiisaha ee Hotels.com wuxuu mudan yahay in la tixgeliyo haddii aadan ku xidhnayn hal astaan ​​oo huteel laakiin aad rabto inaad ka faa'iidaysato faa'iidooyinka hudheelka ee kala duwan. Dhanka kale, Waa ikhtiyaar aad u fiican ugaarsadaha gorgortanka leh oo isha ku haya waxyaalaha ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, iyadoo leh abaalmarino lacag la'aan ah habeenno badan oo ka mid ah guryaha hudheellada iyo summadaha, ma jirto wax khidmad sannadle ah. Dheefta dheeraadka ah ee xubinnimada lacagta sannadka koowaad Kaas oo ay ku jiraan wareejinta madaarka iyo quraac bilaash ah.
12. Kaarka deynta ee Saxiixa Visa ee Alaska Airlines
Kaarka amaahda Saxiixa Visa ee Alaska Airlines waxay leedahay wax badan oo ay bixiso. Oo ay ku jiraan barnaamij abaalmarin aad u qiimo badan oo la yiraahdo Alaska Airlines MileagePlan. Sidoo kale waa mid ka mid ah kaararka amaahda safarka ugu fiican ee socdaalayaasha 2021.
Si kastaba ha ahaatee, kaarkan wax badan baa lagu soo bandhigaa, haddii aad tahay xaashiyaha Alaska ee soo noqnoqda. Ama waxaad tahay dhibcaha ugu sarreeya ee isku dayaya inaad kala duwanaato faylalkaaga abaalmarinta. Si aad u bilowdo, waxaad ku heli doontaa Kaarka Saaxiibka Caanka ah ee Alaska $ 121.
Waxaa jira boorsooyin la hubiyay oo lacag la'aan ah adiga iyo ilaa lix saaxiib oo ku jira jadwalkaaga. Iyo 50% dhimis tigidhada maalinta fadhiga Alaska, oo ay ku jiraan faa'iidooyinka kale. Intaa waxaa dheer, Alaska waxay ku biirtay isbahaysiga One World, oo u oggolaanaya fursadaha furashada aan xad lahayn.
13. Kaarka Deynta Saxiixa Fiisaha Heerka Koowaad ee TD:
Kaarka amaahda Saxiixa Visa ee Heerka Koowaad ee TD waa ikhtiyaar wanaagsan haddii aad rabto APR hordhac ah oo hooseeya. Dhibco badan, iyo gunno soo dhaweyn deeqsi ah.
Barnaamijka abaal -marinta ayaa deeqsi ah, oo 3X mayl safar ku jira. Waxay kaloo leedahay iibsashada cuntada iyo 1X mayl dhammaan macaamilada kale.
Si kastaba ha ahaatee, gunnada hordhaca ah ayaa ah mid rafcaan leh, iyadoo 25,000 mayl la heli karo haddii aad ku bixisid $ 3,000 lixda bilood ee ugu horreysa kadib sameynta koontadaada. Soo -jeedinta waxaa lagu shaabadeeyay 0% APR 12 -kii bilood ee ugu horreysay, ma jiro ajuurada macaamil ganacsi shisheeye, iyo khidmad sannadeed sannadka koowaad.
14. MasterCard World Mastercard:
Money.com waxay ku talinaysaa Frontier Airlines World Mastercard inay tahay mid ka mid ah kaararka safarka ugu fiican ee la heli karo. Sababtoo ah waa mid ka mid ah kaararka amaahda dayuuradaha ee u oggolaanaya macaamiisha inay kasbadaan hal mayl xagga heerka sare ee doolar kasta oo la isticmaalo. Kaalinta 14aad liiskayaga kaararka amaahda safarka ee ugu wanaagsan sanadka 2021 -ka waa Mastercard -ka xuduudaha ee diyaaradaha.
Markaad hesho heer sare, waxaad heli doontaa bacaha wax lagu qaado oo lacag la'aan ah, fuulitaanka mudnaanta leh, iyo kursi sare oo la cayimay. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad ugu yaraan ku kharash garayso $ 2500 iibsiyada sannadka, waxaad u -qalmi doontaa tigidh duulimaad $ 100 sannad -guurada xisaabtaada. Inta lagu jiro sanadka ugu horeeya, khidmadda sanadlaha ah ee macquulka ah ee $ 79 waa laga dhaafay.
15. Delta SkyMiles Platinum American Express Card:
Delta SkyMiles Platinum Amex waa ikhtiyaar aad u wanaagsan taageerayaasha Delta oo u baahan kaalmo yar oo dheeri ah si ay u gaaraan maqaam sare. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah kaararka amaahda ugu wanaagsan ee safarka 2021.
Intaas waxaa sii dheer, kaarkaan wuxuu la imaanayaa faa'iidooyin dhowr ah, oo ay ku jiraan kaarka wehelka sanadlaha ah iyo boorsada lacag la'aanta ah ee duulimaadyada Delta.
Si kastaba ha ahaatee, marka aad xaddi go'an ku bixisid kaarkaaga sannadka kalandarka. Waxaad heli doontaa gunno Medallion Qualifying Miles (MQMs) iyo dhaafitaanka Medallion Qualifying Dollar (MQD).
16. World of Hyatt Credit Card:
Kaadhka amaahda ee Hyatt World waa ikhtiyaar aad u fiican haddii aad raadineyso kaar ku siinaya faa'iidooyin hoteel oo waaweyn.
Intaa waxaa sii dheer, kharash sanadle ah oo hooseeya oo ah $ 95, waxaad heli doontaa faa'iidooyin badan, sida foojarrada joogitaanka habeenkii ee bilaashka ah, dhibcaha heerka sare, iyo tan dhibco gunno ah.
17. Kaarka United Explorer:
Kaarka United Explorer wuxuu bixiyaa faa'iidooyin kala duwan. Oo ay ku jirto 25% dib ugu soo noqoshada United-ka ee duulimaadka, iyo boorsada la hubiyay ee ugu horreysa oo lacag la’aan ah marka aad u adeegsanayso kaarka si aad u ballansato duulimaad. Waa mid ka mid ah kaararka amaahda safarka ugu fiican sanadka 2021.
$ 100 Gelitaanka Caalamiga ah ama TSA PreCheck Fee credit, mudnaanta raacitaanka mudnaanta, laba baas oo hal mar oo lacag la’aan ah ayaa loo gudbiyaa Naadiga United. Iyo xirmo soo dhaweyn leh oo deeqsinimo leh oo ay kujirto 60,000 mayl gunno ah kadib markaad ku kharash garaysay $ 3,000. Si kastaba ha ahaatee, cherry-ka dushiisa ah waa lacag sannadle ah oo eber-doolar ah sannadka koowaad.
18. Kaarka Mileup Aadvantage ee American Airlines
Waxa ku xiga liiska kaararka amaahda safarka ugu fiican waa kaadhadhka AAdvantage Mileup Card. Kaarka American Airlines AAdvantage MileUp Card ma noqon karo mid aan cillad lahayn. Laakiin waxay siisaa xidhmooyin qurux badan oo dhammaystiran dadka haysta kaadhadhka, oo ay ku jiraan barnaamij dhibco aad u soo jiidan kara oo loo adeegsan karo kharashaadka 25 -ka wada -hawlgalayaasha safarka, sida CreditCards.com tilmaamayso.
Si kastaba ha ahaatee, ma jirto khidmad sanadle ah oo laga walwalo, oo haddii aad ku qarashgareyso $ 500 saddexda bilood ee ugu horreeya ka dib markaad furato koontadaada, waxaad heli doontaa gunno soo dhaweyn 10,000-mayl ah.
19. Kaarka Amaahda ee aan Xuduudda Lahayn ee Marriott Bonvoy:
Kaarka Marriott Bonvoy Boundless waa kaarka heerka gelitaanka oo awood u siin kara dadka ku cusub barnaamijka Bonvoy inay cagaha qoyaan. Marriott Bonvoy oo aan xuduud lahayn waa mid ka mid ah kaararka deynta ee ugu wanaagsan safarka 2021.
Intaas waxaa sii dheer, kaarku wuxuu u fiican yahay kuwa sii jooga Marriotts, laakiin kuma filna inay ka faa'iidaystaan ​​kaararka Marriott ee heerka sare ah. Intaa waxaa sii dheer, sannad -guurada kaarboonka kasta waxay la timaaddaa shahaadada habeenkii ee bilaashka ah (illaa 35,000 dhibcood).
Intaa waxaa dheer, darajada sare ee Silver waa mid otomaatig ah, oo leh waddo loo maro Dahabka. 15 dhibco habeen oo heer sare ah sanad walba si ay kaaga caawiso inaad gaarto heerka dhexe ama sare ee barnaamijka Bonvoy.
20. Southwest Rapid Rewards Plus Plus Credit Card:
Ugu dambayn liiska kaararka amaahda safarka ugu fiican ayaa ah abaalmarinnada degdegga ah ee Koonfur -galbeed iyo kaarka deynta.
Xawaaladaha soo noqnoqda, Bixinta Kaadhka Lacag -bixinta ee Southwest Rapid Rewards Plus Plus waxaa ka mid ah 65,000 dhibcood oo gunno ah ka dib markii ay kharash gareeyeen $ 2,000 saddexda bilood ee ugu horreeya ka dib hawlgelinta koontada iyo 3,000 oo dhibcood oo gunno ah sannad -guuradii xisaabta kasta.
Intaa waxaa sii dheer, ka dib markii ay urursadeen 125,000 oo dhibco sannad gudaheed. Waxaad awoodi doontaa inaad raacdo wehelkaaga duulimaadka Koonfur -galbeed ee aad dooratay lacag la'aan.
Kaarka amaahda safarka ee hufan ayaa laga yaabaa inay ka dhigto safarka mid ku habboon oo kharash badan leh. Intaa waxaa sii dheer, kaararka amaahda ee safarka ugu fiican ayaa u saamaxaya dadka kaarka leh inay lacag la'aan helaan. Ama fasaxyada aad hoos ugu dhacay, caawi haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah oo safar. Oo kharashyada ha yaraadaan (ama gebi ahaanba ka bood). Waxaad dooran kartaa kaararka amaahda safarka ee ugu fiican adiga iyo caadooyinkaaga safarka haddii aad hayso macluumaadka saxda ah.
Waa maxay kaarka amaahda safarka ugu fiican?
Kaarka amaahda safarka ugu fiican adiga ayaa ku yeelan doona dakhli aad u sarreeya aagaggaaga kharash-garaynta ee ugu sarreeya, dhibco-qiime aad u sarreeya ama mayl oo aad isticmaali doonto, iyo, sida habboon, xoogaa dhiirrigelinno la xiriira socdaalka ah.
Waa maxay noocyada kaararka amaahda safarka ee jira?
Kaararka amaahda safarka waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood: diyaaradda, hudheelka, iyo kaadhadhka abaalmarinta safarka guud. Kaararka amaahda ee diyaaraduhu waxay bixiyaan gunno u gaar ah diyaaradda iyo sidoo kale kasbashada mayl iyada oo loo marayo barnaamijka daacadnimada diyaaradda ee safarada bilaashka ah.
Intaa waxaa sii dheer, kaararka amaahda ee hoteelka ayaa ku siin doona dhibco joogitaan lacag la'aan ah iyo faa'iidooyin kale oo hoteel gaar ah leh iyada oo loo marayo barnaamijka daacadnimada hudheelka. Intaa waxaa dheer, waxaad isticmaali kartaa kaararka abaalmarinta safarka guud si aad u hesho dhibco dabacsan iyo mayl oo loo isticmaali karo in lagu ballansado nooc kasta oo safar ah ama lagu wareejin karo diyaarad ama barnaamijyada daacadnimada hoteelka.
Sidee bay u shaqeeyaan kaararka amaahda safarka?
Kaararka amaahda ee safarka ayaa bixiya dhibco ama mayl loo adeegsan karo duulimaadyada, joogitaanka hoteelka, safarrada, iyo kharashyada kale ee la xiriira safarka. Intaa waxaa dheer, kaararka amaahda safarka ugu fiican ee la soo bandhigo waxaa ka mid ah faa'iidooyin iyo ilaalin ka dhigaysa safarka mid ku habboon oo kharash badan leh.
Ma mudan tahay in la helo kaarka amaahda safarka?
Qof kasta oo si joogto ah u safra oo bixin kara deynta kaarka deynta si buuxda bil walba, safarada kaararka deynta ayaa qiimo leh. Haddii aadan si joogto ah u safrin si aad qiil ugu yeelatid qarashka sanadlaha ah, kaarka amaahda safarka ee bilaa sanadlaha ah waa ikhtiyaar wanaagsan.
Ku -dheelitirka kaarka amaahda, xitaa kaarka amaahda safarka ugu fiican, laguma talinayo sababtoo ah dulsaarka oo kordhay. Abaalmarin kasta oo safar ah oo aad hesho waxaa lagu cuni doonaa khidmadaha dulsaarka.
Ma ka heli kartaa dhibco safar oo isku jira kaararka deynta ee kala duwan?
Qaar ka mid ah shirkadaha kaararka deynta ayaa kuu oggolaanaya inaad isku darto dhibcaha safarka ee kaararka kala duwan illaa iyo inta ay qayb ka yihiin barnaamijka abaalmarinta. Intaa waxaa dheer, waxaad isku dari kartaa dhibcaha Abaalmarinta Ugu Dambeeya ee lagu kasbaday Chase Sapphire Reserve® iyo kuwa lagu kasbaday Kaarka Amaahda ee PreferredSM Ink, tusaale ahaan. Intaa waxaa sii dheer, ilaa inta dhibcaha hoteelka ama mayllada diyaaradda ay ka socdaan barnaamij daacadnimo oo isku mid ah, waxaad ku dari kartaa kaararka deynta ee kala duwan.
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Kaarka Lacagta iyo Kaarka Amaahda?
15 Kaararka Amaahda Ganacsiga Ugu Fiican
11 Kaararka Amaahda Bilowga Ugu Fiican ee Aan Lahayn Sibtember
Waxaan haystaa Dhibco Dhibco oo Xun, Beddel Kaararkan Deynta ah
Maxay ka dhigan tahay inaad Kiraysato Baabuur? Farqiga u dhexeeya Kiraynta iyo Iibsiga Baabuurka
Maqaalkani waa mid toos ah wuxuuna xooga saari doonaa kireynta baabuur vs iibsashada. Asal ahaan waxaan tixgelin doonaa…
Halkee Lagu Iibin Karaa Soda Taabadaha Lacag Lacag Ku Helay Sanadka 2022 | 4 Macnaha Sharciga ah
Yaa u malaynayey inaad lacag ka samayn karto iibinta tabyada daasadda pop -ka. Xitaa ha u maleynin inay tani tahay…
Sida Loo Noqdo Wakiilka Shati-siinta Hal-abuurayaasha 2022
U noqoshada wakiillada shatiga hal-abuurayaasha waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag laakiin way fududahay haddii aad ogtahay…
Waa Maxay Suuqgeynta Sumcadda Iyo Sidey Iigu Shaqaysaa
Waxaa meesha ka baxay maalmihii ururadu ay shaqaaleysiin lahaayeen maamulka sumcada khadka (ORM) iyaga oo huwan suuq-geyn sumcadeed. Fikradahaan…